Iyo iPhone 6S ichave iri hombe kuvandudza kwati | IPhone nhau
Iyo iPhone 6S, iyo inotarisirwa kuvhurwa munaGunyana, inogona kudaro iyo hombe kuvandudza munhoroondo yeiyo yakarumwa apuro foni. Izvi zvinotaurwa naMing-Chi Kuo, anobva kuKGI Securities, achiti iyo iPhone 6S (Yaisazove iri iPhone 7 here?) Ichave iine kaviri RAM kupfuura avo vamutangira, kuwedzera kwakanyanya kweprosesa, yakanakisa kamera, mavara matsva, nesafiri kuratidza, yakasimbiswa casing, Yakawedzerwa Kubata ID y Simbisa kubata. Chaizvoizvo chinhu chete chingamatira chingave saizi mbiri. Hapana.
Muchikamu che RAM, nhasi mushumo unoti iyo iPhone 6/6 Plus ichave nayo 2GB yeLPDDR4 RAM, apo ndangariro dzinoshandiswa mune zvazvino mamodheru i1GB yeLPDDR3 RAM. Musiyano mukuru pakati peDDR3 neDDR4 uri mumutengo uye mune chokwadi chekuti nyowani ine yakanyanya kukwirisa wachi kumhanya kupfuura kumhanya kwemhando yapfuura.
Izvo zvinokurudzirwawo kuti iyo iPhone 6S ichave iine processor ine simba zvakanyanya, one 12 megapixel yekumashure kamera, yakavandudzwa Kugunzva ID yechengetedzo yakakura mukubhadhara neApple Pay uye imwecheteyo Force Kubata tekinoroji inoshandiswa muApple Watch uye MacBook Retina, izvo zvinopesana nerunyerekupe rwemberi rwekuti Force Kubata kweinotevera iPhone kwaizove kwakasiyana, kuona iyo yekupedzisira nzvimbo yakatsimbirirwa uye kwete kumanikidzwa kunoiswa.
Iwo odhiyo yemavhidhiyo akanyorwa neiyo yapfuura iPhones yakanga iri chinhu icho vazhinji vashandisi vakanyunyuta nezvazvo uye zvinoita sekunge Apple ingadai yakazvitora zvakanaka nekuwedzera maikorofoni yekuwedzera padyo nemutauri kuti uwedzere mhando yekurekodha kwako.
Mukugadzirwa kwekunze, Apple yaizoedza kudzivirira kudzokororazve kwe "BendgateUchishandisa 7000 Series aruminiyamu izvo zvinenge 60% yakasimba kudarika izvo zvinoshandiswa muPhones dzanhasi uye izvo zvatove zviripo paApple Watch. Muchiitiko cheiyo smartwatch, iyo Series 7000 aluminium inoita kunge inokwenya kunyangwe iri pasi peiyo isina simbi modhi.
Nezve iwo mavara, uye ndosaka takati icho chinhu chete chakasara chiyero chemasikirini, iyo iPhone 6S ichauyawo neiyo Ruvara Rose Goridhe (yakasimuka goridhe), ruvara rwatinogona kuona kare paApple Watch uye kuti iwe unorifarira kana iwe chausingade, asi rinosiya pasina kana hanya. Ruvara rwakanyanya kuitirwa vateereri vechikadzi. Uye kune avo vanoda terminal ine kupera kuri nani, KGI inoratidza kuti pachave yakatemwa edition iPhone 6S iyo inosanganisira yesafiri kuratidza, chimwe chinhu icho Apple yanga yatove kuongorora uye icho chingashande sekutanga kuonana kune ramangwana iPhone ine nesafiri skrini pane ese mamodheru. Kwechinguva izvo zvaisakwanisika kuburitsa akawanda masafire epamberi mapaneru nekuda kwematambudziko ekambani yeGT Advanced Technologies, kambani yaifanirwa kuve mutengesi mukuru wechinhu ichi uye iyo yakamisa basa rayo gore rapfuura.
Dai wanga uchitarisira 4 ”iPhone, uyu mushumo mutsva inoramba kuvapo kwemhando diki yegore rino kutaura kuti iyo 4.7 "uye 5.5" shanduro dzichachengetwa. Vazhinji vashandisi vaitarisira kusvika kweiyo iPhone 6C nemoyo weiyo iPhone 6 uye saizi ye iPhone 5s, asi zvinoita sekunge pakupedzisira hazvizove zvakadaro, kunyangwe zvese izvi iri nyaya dzisina chokwadi.
Kutaurwa kunoitwawo, kunyangwe kushomeka, nezve software iyo inosanganisira, kuona izvozvo iyo iPhone 6S inogona kudzorwa nemasaini izvo, zvine musoro, zvinongogoneka nekusanganisa chimwe chinhu chitsva chichauya neIOS 9.
KGI inogumisa mushumo wayo nekutaura izvozvo Apple inoronga kutanga kugadzirwa kwakawanda muna Nyamavhuvhu, inofanotaura kutengesa kwemamirioni 80-90 gore rino uye iyo yakajairwa modhi inotarisirwa kusarudzwa zvakare pamusoro peKuwedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6s » Iyo iPhone 6S inogona kunge iri hombe kuvandudza kune iyo iPhone yenguva dzese.
Patricio meza akadaro
Tavo Farias Alfredo Bustos akaisa yavo iPhone Plus pakutengesa!
Pindura kuna Patricio Meza
Tavo farias akadaro
Do not webees kutarisa kuti ini ndinobhadharisa inishuwarenzi yeimwe uye ikozvino ndine 2 Hahahaha
Pindura Tavo Farias
Mariano Mottassi Fernandez akadaro
Alfredo anotaridzika zvakanaka. zvichava zvechokwadi here?
Pindura Mariano Mottassi Fernández
David anocheka akadaro
Pindura Cortes David
Roberto Treceño Saiz akadaro
Zvakanaka, ini handitengese yangu iPhone 6 plus kana xk buda 6s kana 7
Pindura kuna Roberto Treceño Saiz
Luigi collado akadaro
Adolfo Paul Raposo Tomas Anderson Raposo Mejia Benjamin López zvinotyisa izvo
Pindura Luigi Collado
Javier Camacho muchengeti wemufananidzo akadaro
Ingori makuhwa, senge gore rega rega ………………………………………………….
Pindura Javier Camacho
Ruben Bishop akadaro
Miguel Merino Jiménez wow, shanduko huru !!!
Pindura Ruben Bishop
Miguel Merino Jimenez akadaro
Paunotamba pano vanoisa mawijeti uye voita menyu nemaapplication ese uye desktop ine XD nzira pfupi
Pindura Miguel Merino Jiménez
Uye ndinotya kufunga nezve itsvo mbiri uye ziso izvo zvichabhadhara ...
Chaizvoizvo zvakafanana neyese mitsva iPhone mhando kubva pa4S kusvika pano, € 679-699
Ernesto Valderrama akadaro
Chokwadi yupiiii chokwadi inodhura katatu mamodheru aripo asi iwo anogona
Pindura kuna Ernesto Valderrama
Mangwanani akanaka Ernesto.
Hapana iPhone modhi iri pamusoro peimwe yakambodhura zvakapetwa katatu pane yapfuura, asi zvakada kufanana neiyo yapfuura.
Pablo Zignone akadaro
Ichagadzirisa sezvazvinofanira kuita gore rapfuura ...
Pindura Pablo Zignone
Henry Muzukuru akadaro
Ini handidi saizi uu ... nekuti havana kugara kana kuenderera nesaizi yerudzi rwe iphone 5 / 5s
Joseba Leon akadaro
Pindura kuna Joseba Leon
Hahaha panguva ino vachawana kamera iri nani? Iko kuseka
Alexander Solís Irigollen akadaro
Sarudzo yangu ingadai iri iPhone 6, asi ndakafunga kutenga iyo 6 yekuwedzera nekuti inounza zvirinani maficha, skrini (resolution, kwete saizi), kamera, bhatiri.
Dai vatanhatu vakaunza iwo akafanana maficha, ini ndingadai ndakasarudza kana kufunga nezve iPhone 6. Asi pakati peiyo nyowani iPhones iyo iri pamusoro pezera iri iyo 6 yekuwedzera.
Pindura kuna Alexander Solís Irigollen
Joaquin Javier Pereda akadaro
Zvese zvinoita kunge zvakakwana kwandiri. Chinhu chega chandisingade ndechekuti vamwe vanongova nemasafire screens uye kwete ese.
Pindura Joaquín Javier Pereda
Jose Torres akadaro
Ehezve nekuti iyo s6 pamupendero iri kuibata iyo
Pindura José Torres
Iyo yakachipa kopi ye iPhone 6 hahaha urikutaura nezvayo ???
Chaizvoizvo uye wotarisa kuti haina kudhura, muhoro wako hauna kukwana kutenga imwe
Vari kuenda kuisa mamwe mavara pairi? Zvekuti inobata pfungwa dzako
Kunze kwekunge iwe uchirasa, icho chinoramba chichiita zvakanyatsoenderana musimboti.
Christian Cayd akadaro
Edgar Robles uchatonditarisa neshanje
Pindura Cristian Cayd
Alx Flrs akadaro
Hahahaha pachokwadi ese arikubuda ndeekuvandudzwa kwepamusoro !!!!
Pindura Alx Flrs
Izvo hazvitende chero munhu…
Rudy ndinoenda pane izvo zvakagadziriswa
Luis Chavez Madrigal akadaro
Izvo zvakakodzera kuti ubvunze; yakazvimirira pamutengo, chinzvimbo chehupfumi nezvimwe. Zvakarurama here kushandura iPhone makore maviri ega ega. Kukanganwa nezve hupfumi hwevatengi .. Izvo zvine musoro, ndizvozvo. Iwe uchandiudza, ivo ndivo nyanzvi.
Pindura Luis Chavez Madrigal